Xasan Cali Khayre: Saldhiga milatariga Turkiga wuxuu taageero ka geysan doonaa dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXasan Cali Khayre: Saldhiga milatariga Turkiga wuxuu taageero ka geysan doonaa dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliya
Xasan Cali Khayre: Saldhiga milatariga Turkiga wuxuu taageero ka geysan doonaa dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliya
October 28, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in saldhiga milatariga Turkiga uu ka dhisay gudaha Soomaaliya uu kaalin ka qaadan doono dhismaha ciidanka Soomaaliya.
“Saldhiga tababarka ee Turkiga wuxuu taageero ka geysan doonaa dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliya,” Xasan Cali Khayre ayaa sidaa ku sheegay wareysi uu siiyay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu.
“Waanu ku faraxsanahay xiriirka aanu la leenahay Turkiga ciidan ahaan iyo xiriirka arrimaha ganacsi bulsheedka. Waxaan filaynaa sanadka soo socda ama labada sanno, in ka badan 1,000 ama 2,000 askari ay ka qalinjabin doonaan saldhiga milatariga,” ayuu ku sii daray.
Turkiga ayaa si rasmi ah u furay 30-kii bishii lasoo dhaafay ee September saldhigiisa gudaha Muqdisho.
Saldhiga oo kuyaala koonfurta Muqdisho ayaa la dhisayay labadii sano ee lasoo dhaafay.
Saldhiga ayaa ku fadhiya dhul dhan 4-kiilo-mitir oo isku wareeg ah, waxaana uu awood u leeyahay in ka badan 1,500 askari in ay tababar ku qaataan halkii marba, sida ay sheegeen saraakiisha Turkiga.
April 30, 2017 Islaan Ciise oo soo dhaweeyay mashaariicda horumarineed ee gudaha gobolada Puntland ka socda
November 9, 2017 Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidankeedu saddex maleeshiyo Al-Shabaab ah ay ku dileen gobolka Shabeellaha Dhexe
August 28, 2017 Diyaarad aan la aqoon cida iska leh oo duqaysay deegaano miyi ah oo kuyaala gobolka Gardafuu
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo sheegay in shirka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu hal maalin dib u dhacay
A least 10 killed in hotel attack in Mogadishu
Qarjab urges Puntland people to work together for peace
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland Security Minister Abdi Hersi Ali Qarjab called on Puntland people to work together with the government to end the acts of terrorism in the region. Speaking to Radio Daljir in Puntland on [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa galabta oo Sabti ah dib uga qarxay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Dadka deegaanka ayaa [...]